Ukuqhuba imisebenzi ye-New Orleans Iidrama zeedrayama zeedrayama ezidakile kwaye akukho nxaxheba ekhoyo. Kwakhona nabasebenzi bokwakha kunye nomntu wekhamera. kwiwebhusayithi yentlalo ekhethiweyo yokuzibonakalisa i-show ayifuni ngesondo kuyo. Ingqungquthela ngobunqunu kunye nomxholo omdala.
Uchungechunge lweeKomidi / iDrama yeBantu abadala kunye neendawo zokunxibelelana zokunxibelelanisa indawo yokusebenzisa okanye ishishini.
Umboniso-Abakhiweyo abakhiweyo eNew Orleans
Ikhasi lasekhaya - GET NAKED uze usivule!
U bhaliso lweSayithi
Ukuqeshwa = Ukusebenza kunye neminye imisebenzi yengcali kwi-show yethu.
nakedbuildersneworleans.com > Ukuqeshwa = Ukusebenza kunye neminye imisebenzi yengcali kwi-show yethu.
Wamkelekile kwimisebenzi yethu ekhoyo
Apha uya kufumana imisebenzi esiyisebenzelayo Yenqaku lekhasi kwaye ugcine iso.
Sebenzisa ifom yoqhagamshelwano ukufumana ibhola yokuqhawula xa ubona umsebenzi ongathanda ukwazi ngokubanzi.
Umhloli weZakhiwo- Umntu ophakathi ophakathi ofumana i-HOZZMAN. kufuneka akwazi ukukhupha isicacile esisemzantsi. Le yendima ephindaphindiweyo kwaye uphendu ngalunye luvame ukuphela kweveki kwaye idutshulwa ngolunye usuku.
Udade, odade, kunye neBhete - Le mi sebenzi yindoda kodwa ayikho uhlobo lwenu suku lwangoku kukho oodade bobabini oodade odade kwaye ke iBhete i-butch i-lesch nun. Ezi nxaxheba zidinga ubunqunu obuncinane kunye nokuhlaziywa komzimba kubandakanyeka ukwenzela ukuba usuku ngalunye luyahluka kwaye lube neemfuno ezininzi zomzimba. Ezi nxaxheba nazo zinako ukuba ngabalingiswa abathandayo kwi-show kwaye zingakhokelela kwizigcawu ezingaphezulu kunokuba zikulindeleke.
Umakhi- Ukujonga umakhi wangempela kodwa kungadingeki ukuba inxaxheba yendima indima idinga ubunqunu kunye nokuhlaziywa komzimba le nxaxheba ephakamileyo kakhulu kunye nabanye abakhi kulo mboniso. kufuneka ube nexesha elifanelekileyo.
Abalingani ababini besini esithandana nabo - La maqhinga awamabhinqa amabhinqa amabini abhekene nexesha elinzima apho ubomi kunye nezidakamizwa kunye ne-alchol kukho ubunqunu obufutshane kunye nesimo sobunqunu obunomtsalane kuyadingeka. Oku kuya kuba yinto enye yokudubula komhla kwaye unokuhlawula ku-250.oo ngosuku.
ngaphandle kokuba kuchazwe iindima ezikhoyo zivulekile kwixesha kunye nobuhlanga.
Ndiyabonga ngokuyeka phezu .. Inhlanhla!
Ulwazi kunye nemisebenzi ekhoyo
Zonke iimbopheleleko zitshatileyo. I sithuba. indima okanye indima eqhubekayo
Uninzi lweendima eziphambili. indima inokuhlawula ukuya kwi-200.00 ngosuku.
Indima yokuLawula Izwe 15.00 ukuya kwi-20.00 hr kunye ne-bonus pay
Inxaxheba ephindaphindiweyo xa indima oyidlalayo ibuyela emva eziliqela ngamaxesha kulo nyaka.
indima ephindaphinda ihlawula i-15.00 hr
Ezinye zihlawulwa ngemini kwaye zidla ngokuhlawulwa ngosuku olufanayo lwemali. Uhla lokuhlawula luvela kwi-12.00 ukuya kwi-13.00 hr. okanye usuku olufutshane lunakho ukuhlawula i-75.00 ngosuku okanye kwiiyure ezintlanu
Bonke abadlali baya kuba noxanduva lokuhlawula iirhafu zabo zonke iifom zikaRhulumente ziya kunikwa.
Xa u-Cast okanye uqhubeka okanye i-temp. ukuphindaphinda uza kufumana ukuhlawulwa kwebhonasi esekelwe kwimali yamalungu inyanga nganye. Cents .50 ifakwa kwingxowa-mali ekwahlukana phakathi kwabo bonke abadlali abafanelekileyo kule nyanga. Ukuze ufanele ukubonakalisa ukuba ukhona kufuneka udlale kwisayithi, umboniso ngamnye udlala kwiinyanga ezintathu ngaphambi kokuwa. Ngoko ukuba unomboniso owodwa kwaye idlala inyanga ezintathu ufumana ibhonasi yeenyanga ezintathu. Ibhonasi nganye iyahlawulwa ngeveki yokuqala kwinyanga ezayo. Ukuba uqhubeka okanye uphononongo olubonisa ukuba ungaphakathi luya kudlala iinyanga ezininzi xa umntu ewela ungase uqale omnye. Ingcamango apha ukukwenza kakuhle ngoko nyanga nganye kunye nephosa ukuzisa amanye amalungu kwisayithi. Ngale ndlela bonke abachaphazelekayo bayavuzwa Ngoko ke bhetele kubonisa ukuba wonke umntu ufumana.
Akukho bulili kwiprojekthi yethu, kuya kubakho ukulandelelana kodwa akuze kugcwaliswe kwi-pornography.
Ndiyabulela kunye nenhlanhla!
Yiba nguwe, Mhle!
Ukuloba kweMzantsi KWI-EDGE
Uya kuba nexesha elikhulu kwisayithi yethu
Yenza i-Sprit Yakho ikhulule kwi-EDGE!
Hlala uze uphumule!
Cofa kule nqununu ukuya kwi-EDGE
Yiya kwi-EDGE ukusuka apha ... Yibambe IKONA ! Hlahla uze usiphendule ..
Yiza, siphendule ..
Oku kuya kukhwela!
Awuyi kukholwa into eyenziwa apha ...